China Ọkụ Ọkụ Uk China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọkụ Ọkụ Uk - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọkụ Ọkụ Uk)
Nnukwu ọkụ nchekwa nchekwa ụlọ nchekwa Bay Bay 150W
Nnukwu oghere ọrụ Bay Bay 150W bụ 130lm / w na lumụ 19500. Ihe Nkpukpo ahihia anyi 150w High Bay nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ogo nke nrụnye maka Lighting Warehouse Lighting a bụ 5-7m. Igwe mmiri a dị elu 250w bụ CE ROHS ETL DLC. Nnukwu mmiri zoro ezo maka ndozi ọkụ eji maka nkwakọba, factory, ogbako, ụgbọ ala...
200W UFO Nke a na-ahụ maka nnukwu ụlọ ahịa
200W UFO Nke a na-ahụ maka nnukwu ụlọ ahịa 1. Ụlọ ọrụ factory 200W mere ka ọkụ dị n'ebe ndịda Africa ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 200W ada UFO elu n'ọnụ amazon IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3....
Ụlọ nkwakọba ihe na-eme ka nnukwu mmiri dị elu 200W
Ụlọ nkwakọba ihe na-eme ka nnukwu mmiri dị elu 200W 1. 200 W wetara nnukwu ebe mmiri na-ekpo ọkụ , na ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 200W ụlọ nkwakọbare ada highbay IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. ụlọ ọrụ rụrụ ufo 200W bụ ọhụụ mara mma. Obere na...
200W UFO adapuru nnukwu ọdọ mmiri ọkụ ụlọ nkwakọba ihe
200W UFO adapuru nnukwu ọdọ mmiri ọkụ ụlọ nkwakọba ihe 1. 200 W wetara nnukwu ebe mmiri na-ekpo ọkụ , na ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 200W ufo ada highbay IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. ọkụ ụlọ nkwakọba ihe dị 200W bụ ihe ejiji ọhụrụ. Obere na...
Ọkụ Ọkụ Uk Ọkụ Kasị Ọkụ Ọka Kasị Ọkụ Ọka Ọkụ Bulb 100 Watt Ọkụ Ọkụ Ọkụ Mgbanyụ Ọkụ Ọkụ ọka E27 Ejiri ọkụ ọkụ